EyeThupha 22, 2018 admin
Revolut uya kuvumela abasebenzisi ukuba ukufumana imali emva Bitcoin
Revolut uqala “Metal ikhadi” evumela abarhola 1% imali emva ngaphandle kwe Europe, & 0.1% eYurophu, ehlawulwa ngo cryptos ezifana Bitcoin, Litecoin, kunye nabanye. Kuyaphawuleka, Revolut inika iinkonzo ibhanki rhoqo ngokusebenzisa lokusebenza kwalo.
Ukufumana imali emva crypto ifumaneka kukuthenga ikhadi, kunye etsalwe ATM zehlabathi ngenyanga nganye phezu $772. Eli khadi bank metal awodwa aya malini $155 ngonyaka ngamnye. with malunga 2.5 abasebenzisi million kulo lonke elaseYurophu, uya kubhenca ngakumbi cryptocurrencies ukuba abantu. uNikolay Storonsky, CEO of Revolut okuphawulwe iqaliswa, "Seyiseke ngokupheleleyo ukuba Revolut Metal uya kuba ikhadi kuphela elizayo, yaye umele uzi- zabahambi emhlabeni.
China siphelisa ibamba iziganeko crypto in edolophu Beijing
iindawo Commercial ibekwe yiPort Beijing ngoku evaliwe ehambele imicimbi cryptocurrency. Abasemagunyeni kwisithili Chaoyang Beijing baye kujikeleziswe umyalelo, yomhla we-Aug. 17th, amashishini isilumkiso ezifana izakhiwo ofisi, iihotele, kunye kudederhu lweevenkile ukuba kufuneka kubamba iziganeko ekhuthaza cryptocurrencies, phambili imibutho emibini ubuncinane ukuya ukurhoxisa iziganeko ebimiselwe kwi saziso elifutshane.
Dovey Wan, umlawuli kwi mali siqinile Danhua Capital, wathi yena ukholelwa umyalelo sisongezelelo le cryptocurrency yorhwebo ban ukuba urhulumente kazwelonke kuqala ukusebenza kunyaka ophelileyo. wachaza: "Chaoyang i yesithili yokomfuziselo kakhulu, ntoni ozakuthathwa 'iziko kwamandla core'. Kwakhona okusingqongileyo okulawulayo kaThixo “andise aziwe” Akuyomfuneko uhlanga ngokubanzi namaxwebhu asemthethweni e China, oku sele ubeka ithoni. "
7 Premier League amaqela iqabane kunye eToro eentlawulo Bitcoin
iqonga Tel Aviv-based mali jikelele eToro iye ingene ubambiswano imbali nge 7 iiklabhu Premier League Football, leyo eya kuzenza iintlawulo ukuba abadlali babo Bitcoin. Iikomiti zibandakanya Leicester City FC, Newcastle United FC, Southampton FC, Ubedlala FC kunye nabanye. Njengenxalenye yale nto ibitheni, abadlali iqela liya kwenziwa iintlawulo e Bitcoin nge eToro izipaji digital.
eToro kaThixo kuMlawuli Ophetheyo Iqbal V. Gandham uthe “…sinemincili kufuneka ukubambisana iiklabhu ezininzi kangaka Premier League, kwaye wenze imbali… isaziso Namhlanje linyathelo lokuqala encinane kwindlela ende… lwimi ngakumbi.Ugqaliso jikelele ngokusebenzisa ezi iiklabhu Premier League kubonisa ithuba elikhulu ekwandiseni ulwazi. Blockchain kuzisa ukungafihli, nto leyo ithetha ukuba unako ukuphucula amava ukuze wonk 'ubani uthanda ukuba' umdlalo omhle. '”
media Crypto zavalwa WeChat
akhawunti Blockchain kunye cryptocurrency osasazo China ziye wavalwa ngo WeChat, isithunywa app. Umyalezo olandelayo luboniswe kumaphepha akhawunti Deepchain, Huobi News, Jinse, Deepchain, CoinDaily nabanye abaninzi. “Ngenxa kubasebenzisi’ izikhalazo kunye nasemva kweemviwo eqongeni xa, akhawunti ifunyanwa ndaphule… yonke imixholo ziye zavalwa. Le ngxelo iye kuthintelwe ukusetyenziswa.”
Yinto Akucaci ngeli xesha kanye kutheni ziye zavalwa akhawunti. kunjalo, China babeke ezintsha “umyalezo kawonke” imithetho kuthiwa kujoliswe amajelo eendaba blockchain ngo Agasti 7 leyo isenokuba iza ngenxa yokuvalwa akhawunti.
Bitcoin Bottom is in, kunjalo,...
Post Next:Blockchain News 23.08.2018